Mudaaharaadyo rabshado wata oo ka socda Sydney iyo Melbourne, boqolaal ayaa la xiray
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Australia » Mudaaharaadyo rabshado wata oo ka socda Sydney iyo Melbourne, boqolaal ayaa la xiray
Wararka Australia • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Socdaallada ka hor, booliisku waxay ku dhawaaqeen siyaasad aan dulqaad lahayn oo loogu talagalay mudaaharaad kasta oo ka dhaca Sydney, iyadoo taliye ku xigeenka booliiska New South Wales Mal Lanyon uu sheegay in ilaa 1,400 oo askari loo diri doono ujeeddadaas.
Australiyaanku waxay ka mudaaharaadayaan xannibaadaha ka hortagga COVID.
Mudaaharaadyada Sydney iyo Melbourne ayaa horseeday isku dhacyo booliiska.
Daraasiin mudaaharaadayaal ah ayaa la xiray.
Dibadbaxyo rabshado wata ayaa maanta ka qarxay labada magaalo ee waaweyn ee Australia. Dibadbaxyadii galabnimadii Sabtida ee Sydney iyo Melbourne, iyadoo kumanaan Australiyaan ah ay cambaareynayaan tallaabooyinka adag ee ka dhanka ah COVID-19, qufulka coronavirus iyo amarrada bandowga, ku dhawaaqista halku-dhigyada iyo kor u qaadista calaamadaha ka-hortagga, ayaa si dhakhso leh ugu fiday mudaaharaadyo kulul iyo isku dhacyada booliiska, kuwaas oo ka jawaabay buufin basbaas, jid gooyooyin iyo qabqabasho taxane ah.
Muuqaalo laga soo duubay online -ka ayaa muujinayay dad badan oo dhex maraya Melbourne, meelaha qaarna waxay isku dhaceen ciidamo boolis ah oo aad u badan oo la geeyay si loo joojiyo socodka. Buufin basbaas ah ayaa lagu daadiyey dadkii mudaaharaadayay iyagoo ka jawaabaya.
Tiro dad ah ayaa sidoo kale laga duubay Sydney, halkaas oo la maqlay hal nin oo qaylinaya “maxaad ii xireysaa?” sida ay saraakiishu ula kaxeeyeen.
Socdaallada ka hor, booliisku waxay ku dhawaaqeen siyaasad aan dulqaad lahayn oo loogu talagalay mudaaharaad kasta oo ka dhaca Sydney, iyadoo taliye ku xigeenka booliiska New South Wales Mal Lanyon uu sheegay in ilaa 1,400 oo askari loo diri doono ujeeddadaas. Lanyon wuxuu ku adkeystay "Tani maahan joojinta hadalka xorta ah, tani waxay ku saabsan tahay joojinta faafitaanka fayraska," halka wasiirka booliiska ee gobolka David Elliott uu uga digay mudaaharaadayaasha inay la kulmi doonaan "awoodda buuxda ee booliiska NSW."
Ka sokow hawlgelinta booliiska ee ballaaran, mas'uuliyiintu waxay sidoo kale ku amreen adeegyada rideshare inaysan rakaab u qaadin Degmada Ganacsiga ee Sydney, halka tareenadu aysan joogsan doonin saldhigyada qaar ee magaalada, sida ay sheegayaan wararka maxalliga ah. Isbaarooyin booliis ayaa sidoo kale lagu arkay Sydney, oo ah dadaal lagu xirayo jidadka waaweyn si looga mudaaharaado dibadbaxyada.
Bandhigyada ayaa imanaya waxyar kadib markii mas'uuliyiinta New South Wales ay ku dhawaaqeen xirid COVID-19 oo la kordhiyay Jimcihii, oo lagu wado in la dhigo ku dhawaad ​​kalabar Sydney5 milyan oo qof ayaa deggan bandow habeenkii ah ilaa badhtamaha Sebtembar. Amar kan la mid ah ayaa durba ka jira Melbourne, taasoo la micno ah in ka badan rubuc AustraliaDadweynaha ayaa ku sii jiri doona xannibaadaha qufulka, kuwaas oo u baahan dadka deggan inay guryahooda joogaan marka laga reebo dhowr.
Raiisel wasaaraha NSW Gladys Berejiklian wuxuu ku dooday in talaabada loo baahan yahay si loo yareeyo faafitaanka kala duwanaanshaha Delta ee sii faafa, kaas oo kiciyay kiisas badan oo gobolka oo dhan ah. Waxay soo sheegtey 825 infekshanno maxalli ah Sabtidii, koror aad u weyn marka loo eego 644 oo kor u kacday maalin ka hor.
Gobolka Fiktooriya, oo Melbourne ku yaal, ayaa aad uga fiicnaaday usbuucyadii la soo dhaafay, in kasta oo uu bilaabay inuu arko kor u kaca kiisaska, isagoo soo sheegay 61 24 -kii saac ee la soo dhaafay, halkii uu ahaa 57 labadii maalmood ee la soo dhaafay. Fiktooriya waxay gaartay heerkeedii ugu sarreeyay bishii Ogosto ee la soo dhaafay, markii ay aragtay heerkii ugu sareeyay oo ah 687 caabuq hal maalin gudaheed.